Ihe ohuru ohuru bu Fitbit Versa no na ire ere Akụkọ akụrụngwa
A na-ere Fitbit Versa ọhụrụ ahụ ugbu a
Na mba anyị, elekere Fitbit Versa adịlarị maka ịzụta yana maka ụwa niile. A na-erere igwe elekere smart yana ọkwa ọkwa site na ịbanye a isi price nke 199 euro, nke ruru 1/1 mgbanwe na ọnụahịa dollar nke ngwaọrụ ahụ.
Enwere ike ịnweta smartwatch ọhụrụ a ozugbo na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ site na nnukwu ụlọ ahịa na-ere ya. Na Spain n'oge a anyị hụrụ ya dị na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ, mana oge nnyefe ka dị ogologo, kpọmkwem n'etiti izu 2 na 3 maka mbupu.
Dakọtara na iOS na gam akporo
Ngwongwo kachasị mma nke Fitbit smartwatch a na-agagharị, bụ na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS na gam akporo ngwaọrụ. Obi abụọ adịghị ya na nke a meghere ụzọ maka ire ahịa yana ọnụahịa ahụ adịtụghị ngwa ngwa maka ihe ngwaọrụ ahụ na-enye anyị, yabụ obi abụọ adịghị ya na ọ nwere ike ịbụ nke ọma n'etiti ndị ọrụ. A smartwatch na a batrị na-adịgide adịgide karịa ụbọchị 4 na nke ahụ na-enye mmụba obi na-aga n'ihu, usoro, ọkwa na data ndị ọzọ.
Ọdịdị ya dị oke oke na n'oge ngosi ya ọtụtụ jiri ya tụnyere eze smartwatch, Apple Watch. Maka ndị chọrọ ogo dị elu, enwere ike ịme ha na mbipụta pụrụ iche nwere nkọwa pụrụ iche na agba yana nke na-enye ọrụ Fitbit Pay, na nke a ego na-aga 229 euro. Ozi niile na ụdị Fitbit ndị a dị ugbu a na nwere weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » A na-ere Fitbit Versa ọhụrụ ahụ ugbu a
Echere m, maka nke a, ha boro ebubo na okwute ... ka ha mechara nweta nche ka njọ
Zaghachi Roberto Gonzalez